Onye na-ere ahịa ahịa na-achagharị ahịa na-akwụ ụgwọ n'ọdụ ụgbọ mmiri China Manufacturer
Nkọwa:Ụlọ ahịa ahịa ụlọ ahịa Rolling Shopfront Shopfront,Ọnụ ụzọ kpụkọrọ akpụkpọ ọnụ Crystal Turnut,Ụlọ ahịa na-ere ahịa na-ere ahịa na-ere ahịa na ụlọ ahịa
Home > Ngwaahịa > Ọnụ Ụzọ Mkpuchi Mkpuchi Ikuku > Onye na-ere ahịa ahịa na-achagharị ahịa na-akwụ ụgwọ n&#39;ọdụ ụgbọ mmiri
Onye na-ere ahịa ahịa na-achagharị ahịa na-akwụ ụgwọ n'ọdụ ụgbọ mmiri
Ihe Nlereanya.: HF-J501
Ọnụ ụzọ na-ekpo ọkụ eletriki eletrik nwere ọtụtụ narị pvc ọnụ ụzọ na-esi na tube ígwè. O nwere uru nke nghọta, mgbochi, mgbochi mmiri ozuzo, ájá na ájá. A na-ejikarị ọnụ ụzọ kpuchiri ọnụ ụzọ kpuchie ọnụ ahịa na nnukwu ụlọ ahịa. Ha dịkwa mma maka ọnụ ụzọ imeghe nke chọrọ oke elu. Mgbe emechibidoro ụzọ ahụ, enwere ike belata olu ahụ, na-enye ebe ọrụ dị jụụ. Ngosipụta nke kristal shutter ụzọ na-enye ezigbo visibiliti.
A na-ebuli ọnụ ụzọ kpuchie ọnụ ụzọ dị n'elu ọnụ ụzọ, ma ihe mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ na-eme ka ọ mara mma ma dị elu. A na-ejikwa ya na ngwa ngwa, dị ka ụlọ ahịa ịzụ ahịa, ụlọ ahịa na ihe ndị ọzọ. Ọnọdụ na-arụ ọrụ dị nchebe ma nwee ntụkwasị obi. Ọnụ ụzọ kpuchiri ọnụ ụzọ kpụ ọkụ n'ọnụ dị mma maka ebe nchekwa, nke mara mma na nke dị mma dị ka ụlọ akụ, telivishọn, ụgbọ ala ụgbọ oloko, ụlọ ahịa ejiji na ụlọ ahịa balconies.
Kedu ihe bụ nkọwa nke ọnụ ụzọ kpụ ọkụ n'ọnụ anyị?
Ihe mpempe akwụkwọ ihe mgbochi : polycarbonate (PC bulletproof gluu)
Nkọwaputa: 100 mm × 330 mm
A na-emepụta profaịlụ nke aluminom nke okpukpu abụọ ka e tinye ya n'ọnụ ụzọ.
Dị mfe ma na-emesapụ aka, nrụgide siri ike
E ji ya rụọ aluminom, imepụta pụrụ iche, eguzogide ọgwụ ọjọọ, ọdịdị mara mma
Ngwongwo aluminium, ntanye nke okpukpu abụọ, ihe ogbi nwere ike itinye n'ime uzo iji nweta mmetuta
Na 24 V DC moto, ọ dị jụụ, dị mma, a pụrụ ịdabere na ya.
Enwere ike imezu: ahụ ụzọ ahụ na-amalite / mechie akpaghị aka mgbe ọ bụla ihe mgbochi mere; oghere ahụ meghere ma mechie, ọkụ ọkụ na igbu oge maka nkeji atọ; enwe ike ịgbanwere ike ọdịda na ntinye akwụkwọ.
Nhazi nhazi: ike na-enweghị ike igbochi ya.
Ngwaahịa anyị na-emetuta :
-1 Atụmatụ zuru ezu, iji nweta mmetụta nke ngosi windo na-egosipụta, nhọrọ kachasị mma maka ọmarịcha ogbe ime obodo
-2 N'iji polycarbonate, ezigbo arụmọrụ na-ezu ohi
-3 Mmetụta dị mma akara, iji gbochie ifufe na mmiri ozuzo
-4 Akara elu ike, ihe omimi nke aluminom agbakwunyere na ọnụ ụzọ PC, ike siri ike siri ike, adabara maka nnukwu facade eji 5, ihe dị mfe na mmesapụ aka, mara mma
-6 Enwere ike idozi na ala / aka ekpe na aka nri, kwesịrị ekwesị maka ebe ịmepụta pụrụ iche iji wụnye ibo ụzọ shutter
Ngwaahịa : Ọnụ Ụzọ Mkpuchi Mkpuchi Ikuku
Aluminum Alloy Alloy Crystal Roller Shutter Door Kpọtụrụ ugbu a
Aluminum Alloy Transparent Crystal Roller Shutter Door Kpọtụrụ ugbu a
Ọnụ Ụzọ Ákwà Mkpuchi Mkpuchi Crystal Crystal Kpọtụrụ ugbu a
Ikuku Remoter Control Roller Door Kpọtụrụ ugbu a
Ọnụ na-ahụ maka ntanetị maka ụlọ ahịa Kpọtụrụ ugbu a
Ọfụfụ Ịgba Ọkụ Ikuku na-ere ahịa na-agbagharị n'Ọnụ Ụzọ Kpọtụrụ ugbu a
Onye na-ere ahịa ahịa na-achagharị ahịa na-akwụ ụgwọ n'ọdụ ụgbọ mmiri Kpọtụrụ ugbu a
Okpokoro Vertical PC Transparent Okporo Ụzọ Ịgba Ọkụ Kpọtụrụ ugbu a
Ụlọ ahịa ahịa ụlọ ahịa Rolling Shopfront Shopfront Ọnụ ụzọ kpụkọrọ akpụkpọ ọnụ Crystal Turnut Ụlọ ahịa na-ere ahịa na-ere ahịa na-ere ahịa na ụlọ ahịa Ụlọ ahịa na-ere ahịa ụlọ ahịa Ụlọ ahịa ahịa ahịa PVC Roller Shutter Ọnụ Ahịa Ọnụ Ahịa Rolling Shop Ọnụ ọnụ ahịa ụlọ ahịa dị ngwa Ụlọ ahịa ụlọ ntanetị